- सविना देवकाेटा | शनिबार, चैत ५, २०७८
तथ्याङ्क नभएको भए संसार कस्तो हुन्थ्यो होला ?
अनुमानको घडेरीमा बास बस्नुभन्दा पहिले नै मानसपटलमा आइपुग्छ, कोरोनाको विश्वव्यापी वल्ड्रमिटरको सूची ! जहाँ मर्ने र सञ्चो हुनेको रियल टाइम तथ्याङ्क हेरेर बन्दाबन्दी खोल्ने/नखोल्ने निर्णय मात्रै होइन, स्वास्थ्यसम्बन्धी रणनीतिहरू नै फेरबदल हुने गर्थे ।
तथ्याङ्क नभएको भए सम्भवतः युक्रेनमा कति मान्छे मरे भन्ने आधार पनि त यतिखेर हुँदैनथ्यो ! न त रुसले कति हातहतियार प्रयोग गरेको छ भन्ने नै थाहा लाग्थ्यो ।
सम्भवतः सेयर बजार कति अंकले घटबढ भयो, अत्तोपत्तो हुँदैनथ्यो । फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल कतिजनाले कुन समयमा कसरी प्रयोग गरिरहेछन् ? अहँ ! केही थाहा हुँदैनथ्यो ।
कति जना छन् भन्ने थाहै नपाइ भान्सेले पकाएको भात कहिले उब्रिने त कहिले नपुग्ने भएजस्तै तथ्याङ्क नभएको देश पनि योजनाविहीन र दिशाविहीन हुन्थ्यो होला ।
सम्भवतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणालाई १९०७ सालको बेलायत भ्रमणपछि त्यसरी दिशाविहीन भइरहन मन लागेन !
बेलायतको योजना, कार्यान्वयन र विकासले पक्कै पनि उनमा तथ्याङ्कको चेत भरिदिएको थियो । त्यसैले हुनुपर्छ, फर्किएर आएको झण्डै चार वर्षपछि जंगबहादुरले नेपालमा पहिलोपटक जनगणनाको अभ्यास गरे ।
जंगबहादुरको जनगणना : बेलायत भ्रमण प्रभाव
हुन त केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा जंगबहादुरको समयको जनगणनाको बारेमा कुनै अभिलेख अभिलेखीकरण गरेको पाइन्न । विभागले वि.सं १९६८ मा चन्द्रशम्शेरको पालामा भएको जनगणनालाई नै पहिलो औपचारिक जनगणना मान्दै आएको छ ।
यद्यपि उक्त जनगणना हुनु ५८ वर्षअघि नै जंगबहादुरले आफ्नो शासनकालमा पहिलो जनगणना गरिसकेका थिए । बेलायत भ्रमणबाट प्रभावित भएरै नै उनले सो काम गरेको हुनसक्ने इतिहासविद्हरूको अनुमान छ ।
वि.सं २०१४ को जनगणनामा काम गरेका इतिहासविद् सत्यमोहन जोशीको पनि सोही मत छ । भन्छन्, ‘बेलायत यात्रा गरेका जंगबहादुरको दूरदर्शीताको प्रमाण हो यो !’ होइन भने जनगणनाको काम गर्न सजिलो अहिले पनि छैन । ‘त्यो जमानामा कति कष्टले गणना गरियो होला’, सम्झँदा पनि झसङ्ग हुन्छन् जोशी ।
वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल त जंगबहादुरले जनगणना गर्न जुटाएको आँटलाई नै सामाजिक सांस्कृतिक क्रान्ति भन्दा अन्यथा मान्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेलाको आवश्यकता भनेको मान्छे मात्रको गिन्ती थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विजुली मूल समस्या थिएनन् । कस्तो युग थियो होला अहिले कल्पनातीत छ ।’ यात्राबाट फर्किएलगत्तै नेपालको कानूनी, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न हौसिएका घटनाहरू हेर्दा पनि जंगबहादुरको बेलायत र यूरोप यात्रा नै गणनाको मूल स्रोत हो भन्ने बलियो आधार भएको उनको भनाइ छ ।
हुन पनि बेलायत भ्रमण गरेको तीन वर्षभित्र नै १९१० मा जंगबहादुरले मुलुकी ऐन बनाएका थिए ।
नेपालको इतिहासमा युरोप भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली जंगबहादुर नै थिए । यद्यपि भ्रमणबाट प्रभावित भएर उनले गरेको पहिलो जनगणना कत्तिको उपयोगी सावित भयो ? त्यसबाट उनले के के योजना तर्जुमा गर्न सफल भए ? त्यसको समीक्षा भने बहसको विषय नै हो । तर भ्रमणलगत्तै देशलाई कानूनी राज्य बनाउने चाह र उत्साह भने उनमा अंकुराएको महसुस गर्न सकिने इतिहासविद् डा. गोविन्द टण्डनको पनि निष्कर्ष छ ।
बेलायतबाट गिद्देप्रेस, ‘काउन्सिल’को नक्कल कौसलअड्डा, वास्तुकला, अङ्ग्रेजी शिक्षक, विद्यालयलगायतका संरचना नेपाल भित्राएका जंगबहादुरमा बेलायतको प्रभाव कति थियो भन्ने कुराको फेहरिस्त उतारिराख्नु सायदै आवश्यक नहोला ।
तिनैमध्येको एक प्रभाव हुनुपर्छ, जनगणना !
हुन पनि बेलायतले वि.सं १८५८ देखि नै हरेक दस/दस वर्षमा जनगणना गर्न थालिसकेको थियो ।
पहिलो जनगणनाले देखाएको डेढ शताब्दी पुरानो नेपाल
बेलायत भ्रमणबाट फर्किएर आएको चार वर्षभित्र नै वि.सं १९१०, १९११ र १९१३ मा गरी जंगबहादुर राणाले नेपालमा जनगणना गर्न लगाएको देखिन्छ ।
यद्यपि यस जनगणनाबारे सबैभन्दा सर्तक हुनुपर्ने तथ्य के हो भने यो आफैँमा पूर्ण भने छैन । किनभने हालसम्म जनगणनाका तीन अभिलेख मात्रै भेटिएका छन् । र, भेटिएका अंश एकै मितिका छैनन् । वि.सं १९१० को अंशलाई पहिलो अभिलेख खण्ड मान्ने हो भने १९११ र १९१३ को फरक फरक सालमा फरक खण्डका अभिलेख भेट्टिएका हुन् ।
यस अर्थमा हेर्दा यी अभिलेख ग्रन्थहरू तात्कालिक जनगणना प्रतिवेदन मध्येका तीन नमूना मात्रै हुनसक्ने प्रा. डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीको भनाइ छ । ‘हुनसक्छ, यी नमुनाहरूले पनि त्यसबेला गरिएको जनगणना प्रतिवेदन अभिलेखहरू कुनै कोठाभरि अटाउने सामग्री थिए होलान् भन्ने अड्कल गर्न सकिन्छ’, सो जनगणनालाई पुस्ताकार दिएका प्रा. डा. रेग्मीले किताबको शीर्षक त्यसैले ‘नेपालको पहिलो नमुना जनगणना’ भनी लेखेको बताएका छन् ।
गेरु वस्त्रले बेरिएको पोको ! पोकोभित्र छन्, हस्तलिखित तीन वटा अभिलेख । धागोले सिएर टम्म पारिएको पाण्डुलिपी । नेपाली पानामा कालो मसीमा चोपेर बासले लेखिएका सुन्दर नेपाली अक्षर । जहाँ छन् नाम, थर, घर, घरसंख्या, लोग्ने मान्छे, स्वास्नी मान्छे, पसल, टोल, मन्दिर, देवल सत्तल, आदि सबैको विवरण !
कति अक्षर त छुट्टयाउनै कठिन देखिन्छ । कति बुझ्नै मुस्किल ।
यद्यपि अक्षरहरू सुन्दर ढङ्गले लिपिबद्ध गरिएको छ । (त्यतिखेर साक्षर मान्छे नै पो कति थिए होलान् ।)
भक्तपुर, पाटन र काठमाडौंको यति लामो हस्तलिखित पाण्डुलिपीरुपी विवरण हेर्दा जोसुकैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, यसका लागि खटिने कप्तान सताराम खत्री र सुवेदार जगत्बहादुर खत्रीले कति मिहिनेत र सास्ती झेल्नु पर्‍याे होला !
उनीहरू वास्तवमा को थिए ? राणाकालका सामान्य प्रशासक या जंगबहादुरका विश्वासपात्र ? थाहा छैन । खैर, उनीहरूको नाम उल्लेख हुनु नै पनि ‘क्रेडिट’को राम्रो अभ्यास देखिएको छ जनगणनामा ।
तर, जनगणना भन्ने शब्दावली जन्मिसकेको थिएन । त्यतिखेर ‘घरजहानको तथ्याङ्क’ भनिन्थ्यो । तीन अभिलेखरुपी पाण्डुलिपीमा गणना नभनेर ‘घरजाहान्को किताप्’ भनिएको छ ।
भक्तपुरबारे उल्लेख भएको गणनाको शीर्षकमा लेखिएको छ : ‘सहर भादगाउँको १९१० साल भाद्रवदि ८ रोजदेषि ये सुदि १० रोजतक दिन १८ भित्रमा घर पाताल जहान जाचियाको किताप् वमोजिम तपसिल’
त्यस्तै पाटनबारे उल्लेख भएको गणनाको शीर्षकमा लेखिएको छ : ‘सहर पाटनका घर–जाहानको किताप् १ ।’
त्यस्तै काठमाडौंबारे उल्लेख भएको गणनाको शीर्षकमा लेखिएको छ : ‘काठमाडौं पाटन पूर्व पश्चिम स्मेत्को जिल्लाबाट घरजाहान्को किताप् ।।’
यसरी संग्रहित भएका तीन घरजहानको अभिलेखअनुसार तत्कालीन समयमा भक्तपुरमा ३०,०३४, पाटनमा २८,७१४ र काठमाडौंमा ५८,५३९ जनसंख्या रहेको विवरण उल्लेख छ । साथै भक्तपुरमा ५,२४१, पाटनमा ५,६३७ र काठमाडौंमा ८,२२३ घर भएको विवरण छ ।
पाटनका घरको विवरण यति सूक्ष्म तरिकाले गरिएको छ कि घर झिँगटे हो या पराले पनि छुट्टयाइएको छ । यद्यपि काठमाडौंको भने घर मात्र भनि लेखिएको छ ।
अनौठो कुरा त के भने झिँगटीको छाना आफू खुसी हाल्न पाइँदैनथ्यो त्यतिखेर । त्यसको लागि स्वीकृति लिनुपथ्र्‍याे । यसअर्थमा हेर्दा झिँगटीको छाना पहुँच, सम्बन्ध र आर्थिक सम्पन्नताको सूचक भएको डा. टण्डन बताउँछन् ।
त्यस्तै भक्तपुरमा २४ र पाटनमा २५ टोलका नामसहितको विस्तृत विवरण दिइएको छ । यद्यपि काठमाडौं बाहिरको ठाउँको भने घरमूलीको नामनिसाना नदिई गाउँको मात्र नाम उल्लेख गरिएको छ ।
त्यति मात्रै होइन पाटनको त हरेक पसलहरूको प्रकारसहित पसलवालाको नाम र थर समेत दिइएको छ । त्यतिखेर पाटनमा भएका ४३८ पसलमध्ये सुन/चाँदीको मात्रै १२२ वटा पसल रहेको पाइएको छ । ४२ वटा त वैद्य पसल रहेको देखिएको छ ।
रोचक कुरा त के भने, पाटन र भक्तपुरको टोलमा खसीको मासु पसल एक÷एक वटा मात्र भएको देखिएको छ । यसले मानिसहरू त्यतिखेर मासु खान रुचाउँदैनथे वा गाँसवासको समस्याले पुग्दैनथ्यो कि भन्ने अनुमानको सुविधा दिएको छ । बरु प्रसूती एवम् केटाकेटीहरूका लागि सुडी पसलहरू हुन्थे जहाँ प्रसूती एवम् बालबच्चाको लागि उपयोगी हुने आयुर्वेदिक/घरेलु औषधिहरू पाइन्थे । यद्यपि भक्तपुरमा भने त्यस्ता सुढी पसलको उल्लेख पाइँदैन ।
हाल भीडभाडले युक्त हुने असनका साँघुरा गल्लीरुपी बस्तीमा त्यतिखेर केवल २ सय २० घर थियो भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । यद्यपि पहिलो जनगणनामा उल्लेख भएअनुसार असनमा त्यतिखेर केवल १,७७५ मानिसहरू मात्रै बस्दथे ।
त्यति मात्रै होइन, हाल अत्याधुनिक बजारको रुपमा विकसित झम्सीखेलमा त केवल ४ पराले घर र २३ जनसंख्या भएको उक्त अभिलेखमा उल्लेख परेको छ । त्यसमा पनि सबै पर्वते रहेको बताइएको छ ।
अर्को रोचक कुरा त के छ भने पहिलो जनगणनामा मान्छे, घर, टोल, पसलको मात्रै नभएर देवदेवीताको समेत गणना गरिएको छ । सम्पदाको समेत गणना गरिएको छ । मानौं यो जनगणना नभएर सम्पदासूची हो । किनभने मठ, मन्दिर, पाटीपौवा, सत्तलहरूको पनि विवरण यसमा संकलन गरिएको छ । यद्यपि काठमाडौं खाल्डोबाहिरको सम्पदाको सम्बन्धमा भने अभिलेख मौन छ ।
भक्तपुरमा मात्रै २२२ देवदेवीका मन्दिर रहेको उक्त गणनामा उल्लेख छ । त्यस्तै पाटनमा पनि ७४५ देवालयहरू रहेको उल्लेख छ । अरु त अरु, पशुपति, चाबाहिल भेकको देवीदेवताका विवरण दिनुका साथसाथै स्वयम्भूका १८० देवीदेवताहरूको नाम र संख्या समेत लेखिएको छ । त्यति मात्रै नभएर स्वयम्भू मन्दिरमा भएका भ¥याङको समेत गणना गरिएको छ ।
साथै, पाटनमा मात्रै ९८ ढुंगेधारा, २१० इनार, ५० सानाठूला पोखरी, ६१ सत्तल र २२७ पाटी रहेको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
मान्छेको मात्रै नभएर यसरी सम्पदाहरूको नै सूची राख्नुपर्ने गरी आखिर किन गणना गरियो होला त ?
यसमा वि.सं १९१० भन्दा पहिले ४५ वर्ष अघि १८६५ र १८९० मा ठूलाठूला भूकम्पले घर, मठमन्दिर भत्केको अनि पुनर्निर्माणको कामलाई लक्षित गरेर तथ्याङ्क राखिएको हुनसक्ने डा. गोविन्द अनुमान लगाउँछन् । विवरणको ठाउँठाउँमा कति घर जगैदेखि उठाइयो ? कति मर्मत/सम्भार गरियो भन्ने तथ्याङ्क समेत भएकाले सो अनुमान निरर्थक नहुन सक्ने सम्भावना भएको उनको विश्वास छ । यसलाई थप प्रमाणित गर्छ, भूपतीन्द्र मल्लको सालिकको विवरणले । किनभने अभिलेखमा उल्लेख भएअनुसार भक्तपुरको पचपन्न झ्याले दरबारको अघिल्तिर रहेको भूपतीन्द्र मल्लको सालिक ढलेको अवस्थामा रहेकोलाई उठाएर राखिएको छ । यसलाई हेर्दा यो जनगणना मात्रै नभएर काठमाडौं खाल्डोको मठ/मन्दिरहरूको साथै व्यक्तिगत घर, पसलहरूको मर्मत/सम्भार र पुनर्निर्माणको अभियानको एउटा पाटो हुन सक्ने अनुमान बलियो भएको टण्डन बताउँछन् ।
त्यस्तै जनगणनामा घाँसी, चुनी, बोसी, चुमावन, गोले आदिहरू रैरकमीहरूको रुपमा पनि गणना गरिएको छ । यसले घाँसीको पेशामा मानिसहरू भएको पुष्टि गरेको इतिहासविद् डा. टन्डन बताउँछन् । त्यस्तैगरी गोल बनाउने ‘गोले’, काठको काम गर्ने बोसी, बगैँचाको काम गर्ने व्याङ÷व्येँहरूको व्यवस्था भएको पनि देखाउँछ ।
त्यति मात्रै होइन देवपाटनस्थित खान आउने बटुवा, माग्ने, तीर्थयात्रीहरूको समेत खानेकुराको विवरण पाइन्छ । साथै शङ्खमूलको सत्तलमा १८३ जनाले आश्रय पाएको विवरण समेत उल्लेख छ ।
त्यस्तै काश्मिरी मुसलमानहरूको पाटनमा बीसवटा विभिन्न पसलहरू भएको बयान पनि अभिलेखमा गरिएको छ । काश्मिरी मुसलमानहरूको पाँचवटा त मासुपसल रहेको देखिन्छ । यसबाट उनीहरूको जनसंख्या पाँचवटा मासुपसल धान्ने किसिमको रहेको अनुमान गर्छन् डा. टन्डन ।
नेपाली इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा हैजाले दुःख दिने गरेको प्रसङ्गहरू आइरहन्छन् । त्यसको असर नमूना जनगणना पनि देख्न सकिन्छ ।
उक्त जनगणनाअनुसार वि.सं १९१३ मा देउपाटन र स्वयम्भूमा हैजाले लागेर मर्नेहरूको विवरण पनि समेटिएको छ । स्वयम्भूमा ७ जना र वरपर टोलमा ३ जना हैजाले मरेको उल्लेख छ । त्यस्तै देवपाटनको चाबाहिल क्षेत्रमा सोही साल हैजाले १ जना वृद्ध, २ जना तन्नेरी, २ केटा, १ तरुनी र १ केटीसहित सात जना र बाँकी टोलमा २६ जना गरी ३३ जना मरेको उल्लेख गरिएको छ ।
टोलैपिच्छेको घरमुलीको नाम, थर उनीहरूको परिवारको संख्याको उल्लेखले त्यतिखेरको परिवारको संख्या कस्तो थियो भन्ने बुझ्न पनि सहयोग गरेको छ ।
परिवारको विवरण हेर्दा त्यतिखेरको परिवारिक संरचना सानो नै देखिन्छ । कसैकसैको मात्रै एक परिवारमा ८÷९ जना देखि १३/१४ जना छन् । नत्र भने तीन/चार/पाँच/६ मै सीमित छ । यो प्रवृत्ति पाटन, काठमाडांै र भक्तपुर सबैमा छ । भक्तपुरका कप्तान वीरभद्र कुँवर राणाको भने ८४ जनाको सबैभन्दा ठूलो परवार रहेको देखिन्छ ।
जनगणनाताका नेपालको क्षेत्रफल ?
यद्यपि सोचनीय कुरा के छ भने, जंगबहादुरले जनगणना गर्दाताका १९१० देखि १९१३ को बीचमा नेपालको क्षेत्रफल खास कत्रो थियो त ? कारण ४ मार्च सन् १८१६ (२४ फागुन वि.सं १८७२) को सुगौली सन्धिले झण्डै आफ्नो एकतिहाइ भाग गुमाएर (पूर्वमा मेचीदेखि तिष्टासम्मको भाग र पश्चिममा महाकालीदेखि सतलज काँगडासम्म) गरिएको अवस्थामा नेपाल तराइविहीन बनेको थियो ।
डा. टन्डनका अनुसार बृहद नेपालले ९१,७५५ वर्गकिमि भूभाग गुमाइ १,१३,१६२ वर्गकिमिको पहिलेभन्दा सानो नोपलाको क्षेत्रफलमा चित्त बुझाउनुपर्‍याे । सन्धिपछि अंग्रेजहरूले गोर्खा रेजिमेन्ट सेना खडा गरी आफ्नो पल्टनमा सेवा लिन थालेपछि उनीहरूको वीरता, इमान्दारी र रणकुशलताको उच्च मूल्यांकन गर्दै वार्षिक दुई लाख रुपैँया नेपाललाई दिँदै आएकोमा त्यसको सट्टा बरु सुगौली सन्धिमा गुमाएको मध्ये केही भूभाग फिर्ता दिने मनस्थिति बनाएर सुगौली सन्धि भएको सातौ महिनापछि ११ डिसेम्बर १८१६ (२८ मंसिर वि.सं १८७३) मा पूर्वी तराईको (दाङदेखि मोरङ–झापा जिल्लासम्म) को २४,८१२ वर्गकिमी भूभाग नेपाललाई फिर्ता भएपछिको १,३७,९७४ वर्गकिमि क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपालको पहिलो नमूना जनगणना हो यो ।
यद्यपि यस दस्तावेजले डेढ दशक अघिको नेपाल चियाउने अवसर दिएको छ ।
जनगणनामा नपाइएको विवरण
स्वयम्भूको सिँढी, टोलटोलको मासु पसल, माग्नेहरूको विवरण दिँदा पनि जनगणना केही विवरणहरू खोजेर पनि पाइन्नन् । यस विवरणमा पूर्वी नेपाल, मौजूदा तराई, पाल्पा पश्चिम तथा हिमाली भेगको विवरण पाइन्न ।
औंलोको प्रकोपका कारण तराईँमा बसोबास थिएन भन्ने अनुमान मात्रै हाललाई गर्न सकिने डा. टन्डनको भनाइ छ । हुन सक्छ, तराई खण्डको जनगणना कुनै अर्को ठेलीमा पनि छ ।
त्यस्तै अन्य ३३ जिल्लाको उल्लेख मात्रै पाइन्छ, विवरण पाइँदैन । गजरकोट, दाङ, सल्यान, मुसिकोट, पर्वतलगायतका जिल्लाका नाम पर्ने उल्लेख भएका छन् ।
झण्डै पाँच÷६ पुस्ता अघिको विवरण भएकोले । त्यसबेलाका शासन/प्रशासनसँग सम्बन्धित व्यक्तिविशेष या राजा÷महाराजा एवम् तिनका परिवारका कुनै विवरण नपाइनुको खास कारण पनि जान्न सकिएको छैन ।
पृथ्वीनारयाण शाहले भक्तपुर जितेको झण्डै ८४ वर्षपछि भएको नमूना जनगणनामा भक्तपुरका २४ टोलमध्ये कहीँ पनि मल्ल थर धारी घरपरिवार नपाइनु अनौठो भएको टन्डन बताउँछन् ।
यस जनगणनाको सौन्दर्य भनेको यसमा नथपिएको भाषिद शुद्धता हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ! किनभने त्यसबेला ख लाई ष को रुपमा प्रयोग भएका छन् । यो भाषिक बोधको कमीका कारक तत्व पनि बन्न सक्छ । जनगणनासँग सम्बद्ध दस्तावेज भएपनि तात्कालिक नेपालको विभिन्न पक्ष र आयामहरूबारे जान्न÷बुझ्न यसको महत्त्व् र उपादेयतालाई कम आँक्न नमिल्ने संस्कृतिविद् तेज्वेश्वर ग्वँगको भनाइ छ ।
जनगणनाको पहिलो नमुनाले नेपालको इतिहास, संस्कृति, भाषा, आर्थिक एवम् सामाजिक धरातलको जग खोतलिदिएको छ । सम्भवतः यसका अरु भागहरू पनि होलान् । यो खोजीको विषय हो । ंयस अर्थमा हेर्दा यस दस्तावेजले तात्कालिक नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक अवस्था बारे अध्येताहरूलाई बाटो खोलिदिएको छ ।
नेपालमा नमूना जनगणना भएको झण्डै १९ वर्षपछि मात्रै वि.सं १९२९ मा बृटिश भारतमा पहिलोपटक जनगणना भएको थियो ।
नेपालमा वि.सं १९६८ देखि हुन थालेको औपचारिक जनगणना हाल १२ औं श्रृङ्खलाअन्तर्गतको पनि सम्पन्न गरेको हो । यद्यपि उक्त जनगणना केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै त भइरहेको छैन ? जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आएको इतिहासविद्हरूको भनाइ छ ।
प्रा. डा जगदीशचन्द्र रेग्मी
काकतालीले भेटिएको पहिलो जनगणनाको दस्तावेज
हाल यस जनगणनाको अभिलेख प्रा डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीसँग सुरक्षित छ ।
पाँच/६ पुस्ताअघिको विवरण भएको उक्त अभिलेखमा आफ्नो पुस्ताको विवरण खोज्छु भन्दै अझै पनि रेग्मीको घर कयौं उपत्यकावासी धाउने गरेको उनी बताउँछन् । ‘विशेषगरी नेवारहरूले खै, मेरो पुस्ताको नाम हेरुँ भनेर आउँछन् । ओहो ! मैले नाम पाएँ भनेर जान्छन्’, रेग्मी आफूसँग भएको जनगणनाको पाण्डुलिपि देखाउँदै भन्छन्, ‘६ लाख मानिसको त इतिहास हो नि यो ।’
आखिर यति महत्त्व्पूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज रेग्मीले कसरी फेला पारे त ?
२०२८ सालतिरको कुरा हो । प्रा. डा. जगदीशचन्द्र रेग्मी तत्कालीन नेपाल अध्ययन संस्थान (सिनास) मा अस्थायी रुपमा हाकिम पदमा करार भएका थिए । इतिहासकार धनव्रज बज्रचार्य पनि त्यहाँ कार्यरत थिए ।
सिनासको अफिसमा एकजना ठूले लामा नाम गरेका हँसिला, गोरा मान्छे नियमित आउँदै ऐतिहासिक कागजात् दिएर जाने गर्दा रहेछन् । बदलामा धनबज्र उनलाई केही रकम पैँसा दिएर उक्त कागजात् लिने गर्दा रहेछन् । यो प्रक्रिया एक÷डेढ वर्षदेखि चलिरहेको थियो ।
कसैले राख्नू भनी दिन आएको ऐतिहासिक कागजात् फाल्न पनि नसकिने । नियमित लिन पनि कष्टकर हुने !
आजित भएर उक्त कागजात् एक खेपमै लिने सर्तमा रेग्मीले ती लामालाई एकदिन घरमै बोलाए । नभन्दै ती मानिसले ठूलै पोकापुन्तुरा सहित ऐतिहासिक कागजात लिएर गए । खोतलेर हेर्दै जाने क्रममा त त्यहाँ नेपालका कयौं ऐतिहासिक दस्तावेजहरू भेटिन पुग्यो । जसमध्येको एक हो ः नेपालको पहिलो जनगणना ।
यसरी काकतालीले उक्त जनगणनाको अभिलेख रेग्मीले हात पारेका थिए । उक्त डकुमेन्ट पहिलोपटक पढेपछि डा. रेग्मी आफ्नो होसहवास् नै गुमेको बताउँछन् । ‘मेरो अवस्था ठीक त्यस्तै भयो जस्तो कुनै नदीमा एन्टी करेन्ट पौडी खेल्दा हुन्छ । न फाल्नु न राखेर त्यसलाई तुरुन्तै जस्टिफाइ गर्नु’, अन्योलमिश्रित खुसी हुन पुगेको उनी बताउँछन् ।
पुराना भक्तपुर, पाटन र काठमाडौंका पुस्तैनी अभिलेख पाइएको उक्त अभिलेख ६ लाख उपत्यकावासीको वंशावली भएको उनको दाबी छ ।
यद्यपि उनी को थिए जो प्रत्येक दिन फालिएका ऐतिहासिक दस्तावेज लिनुहुन्छ भन्दै सिनासको कार्यालयमा धाउँथे । ‘पक्कैपनि उनी कुनै सरकारी कार्यालयको सहयोगी हुनुपर्छ’, रेग्मी अनुमान गर्छन् ।
५० वर्षदेखि अप्रकाशित दस्तावेज बोकेर बसेका रेग्मी
आज ५० वर्ष भयो, ७७ वर्षीय प्रा. डा. रेग्मीले सो जनगणना अभिलेख काकतालीले हात पारेको । वि.सं २०४८ सालमा पहिलोपटक उनले नेपाल एन्टीक्वेरी नामक जर्नलमा उक्त जनगणनाको नमुना बारे छपाएका पनि थिए । त्यतिखेर पनि अलिअलि हल्ला त चल्यो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा घनिभूत छलफल नै चल्यो ।
तर उक्त अभिलेखलाई केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अभिलेखीकरण गर्ने खास सुरसार गरेन । त्यसपछि रेग्मी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या शाखा पनि गए । त्यतिले नपुगेर हुँदाहुँदा उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुला पत्र पटकपटक लेखे । तर अहँ ! उनको अभिलेख संरक्षण गरिदिने कसैले पहल गरेनन् । उनको गुनासो छ ।
यद्यपि नेपालको पहिलो जनगणनाको नमुनारुपी अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयको माइक्रोफिल्मिङ शाखामा डिजिटाइड गरी सुरक्षित राखिएको छ ।
डिजिटल कपी अभिलेखीकरण गर्ने तर ओरिजिनल नहुनुको कारण आखिर के हो त ? उक्त अभिलेखको करोडको मूल्य तोकिएकाले अभिलेखीकरण हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ । रेग्मी भन्छन्, ‘यस्तो ऐतिहासिक दस्तावेजलाई एक होइन पाँच करोड परेपनि राज्यले किन्नुपर्ने हो !’
खैर, ६ महिनाअघि मात्रै संस्कृतिविद् डा. गोविन्द टण्डनको पहलमा उक्त अभिलेखको अध्ययन भएको छ । गएको १७ फागुनमा अभिलेखले पुस्तकको आकार नै पाएको छ ।
जनगणनाको महत्त्व् : सत्यमोहन जोशी
विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्ध (वि.सं १९९६–२००२) को समाप्तिपछि गठन भएको संयुक्त राष्ट्र संघले सर्वप्रथम तर्जुमा गरेको योजना थियो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकरुपता कायम गरी सम्पूर्ण विश्वको जनगणना र तत्सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू एकत्रित गरी विश्व सामू ल्याउने ।
यस बृहद कार्ययाेजनाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वका विभिन्न देशहरूमा जनसंख्यासम्बन्धी शिक्षा र तालिम दिने केन्द्रहरू संचालित गर्दा दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूका लागि भारतको नयाँ दिल्लीमा एउटा ठूलै तालिम केन्द्र खोलेको थियो । त्यसबेला नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भइसकेको थिएन । यसो भएता पनि विश्वको जनसंख्या एकत्रित गर्ने क्रममा नेपालको जनसंख्याको पनि अपरिहार्यता भइसकेको थियो । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई विशेष अनुरोध गर्दा नेपालले पनि तालिम लिनका लागि ६ जना अधिकृतलाई पठायो । त्यसमा एकजना कृषि विभागका अधिकृत थिए भने बाँकी पाँच जना औद्योगिक व्यापारिक समाचार संग्रह अड्डाका अधिकृतहरू थिए ।
त्यसपछि ती पाँच जना अधिकृतहरू : थीरबहादुर रायमाझी, केशरबहादुर आचार्य, हृदयनाथ अधिकारी, नरकान्त अधिकारी र सत्यमोहन जोशीले नै संख्या विभाग भन्ने नयाँ अड्डा खडा गरी नेपालको राष्ट्रिय जनगणना गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व जनसंख्याको गणनालाई पूर्णता दिने काममा योगदान पु¥याएको थियो ।
सोही विभाग नै हालको केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको जननी हो । त्यसयता नेपालमा प्रत्येक १०/१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना लिने परम्परा छ । हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि उच्च शिक्षामा जनसंख्याको पठनपाठन हुने गर्दछ । साथै प्रशासनिक व्यवस्थामा जनसंख्या मन्त्रालय नै खडा गरिएको छ भने राष्ट्रिय योजना अयोगमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग नै राखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ५, २०७८, १४:४५:००